Ny governemanta Canada dia niresaka momba ny fampitsaharan'i Greyhound ny zotram-piaramanidina
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Ny governemanta Canada dia niresaka momba ny fampitsaharan'i Greyhound ny zotram-piaramanidina
Ny fidirana amin'ny safidy fitaterana mora vidy sy ampahibemaso dia ilaina any amin'ny firenena midadasika toa an'i Canada. Na ny fiara fitateram-bahoaka hijerena ny fianakaviana na ny namana, ny mandeha miasa na ny mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana dia mila safidy amin'ny fitaterana ny kanadiana.
Androany, ny Andriamatoa Marc Garneau, minisitry ny fitaterana, Andriamatoa Jane Philpott, minisitry ny serivisy vazimba, ary ny manan-kaja Dominic LeBlanc, ny minisitry ny fitondrana iraisam-pirenena sy ny raharaha avaratra ary ny varotra anatiny dia niarahaba ny zana-bola naroson'ireo mpamatsy fitaterana sehatra tsy miankina amin'ny fividianana ny maro ireo zotra any Western Canada sy avaratry Ontario izay hajanon'ny Greyhound Canada manomboka amin'ny 31 Oktobra 2018.
Na dia hanome serivisy fitohizan'ny fiara fitateram-bahoaka izay mandrakotra ny 90 isan-jaton'ny faritra voakasik'izany aza ny elanelana sasany dia mijanona amin'ny toerana tsy misy ny safidy fitaterana hafa. Ny governemanta Canada dia manaiky ny maha-zava-dehibe ny fihenan'ny Greyhound tampoka amin'ny serivisy fitateram-bahoaka ho an'ny Kanadiana maro, indrindra ho an'ireo zokiolona sy ireo any amin'ireo vondrom-piarahamonina vazimba, vondrom-piarahamonina ambanivohitra sy lavitra.
Vonona ny Governemanta Canada hanampy ireo faritany voakasik'izany amin'ny famaritana ny lalana tsara indrindra handrosoana ary misokatra amin'ny fandinihana ireo làlana hitadiavana vahaolana mahomby. Ny minisitra dia nanome toromarika ny hanohizana ny asa amin'ny faritany mba hanohizana ny fanombanana ny fandrakofana ataon'ireo mpamatsy fitaterana vaovao. Raha faritan'ny faritany fa ilaina ny famahana ny banga amin'ny serivisy Greyhound nateraky ny fampiatoana ny serivisy fitaterana amin'ity herinandro ity, ny Governemanta Kanada dia misokatra amin'ny fandinihana ny fanomezana fanohanana ara-bola ho an'ireo faritany miaraka amin'ny teti-bola sy ny tetezamita.
Ho fanampin'izany, ny Governemantan'i Kanada dia manao fiaraha-monina Vazimba mba hanome fanampiana fanampiny an'ireo orinasam-pitaterana an'ny Vazimba, amin'ny alàlan'ny fandaharana efa misy, toy ny Aboriginal Ent entrepreneursurship Program, hahafahan'izy ireo manararaotra manome vahaolana ara-barotra amin'ireo vondrom-piarahamonin'ireo vazimba teratany voakasik'izany.
Ny fitsipi-pifehezana ara-toekarena an'ireo mpitatitra fiara mpitateram-paritany dia notarihin'ny faritany sy ny faritany nanomboka ny taona 1950, teo ambanin'ny lalànan'ny Governemanta an'ny fiara mpitondra fiara any Canada. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny fepetra amin'ny fidirana na ny fivoahana, ary ny fanaraha-maso ny sanda sy ny zotram-pitan'ny mpitatitra fiarabe iraisam-pirenena, ary ny fanomezana famatsiam-bola kendrena amin'ny tranga sasany. Vondron'olona manampahefana miasa amin'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny araben'ny federaly, ny faritany ary ny faritany no niasa nanomboka ny volana jolay 2018 mba hahatakarana bebe kokoa ny fiantraikan'ny fihenan'ny serivisy amin'ny fanapahana sy hamolavolana vahaolana.
Ny governemanta federaly, faritany ary faritany dia hanohy hiara-miasa mba hikaroka vahaolana maharitra sy maharitra hamahana ny filan'ny kanadianina amin'ny fifamoivoizana, hifantoka amin'ny teknolojia vao misondrotra, ny maodely fanaterana serivisy hafa ary ny lalàna mifehy kokoa an'ireo mpanome tolotra bus.
“Mamporisika ahy ny fahalianana izay novoakàn'ny orinasam-pitaterana sehatra tsy miankina amin'ny fakana ny zotra izay tsy hoentin'ny Greyhound Canada intsony. Maniry mafy ny hiara-hiasa amin'ny faritany sy faritany amin'ny fikarohana vahaolana aho. Manantena valiny tsara aho izay hamaly ny filan'ny fivezivezena an'ny Kanadiana. ”
“Hiantraika amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba maro ny fanafoanana ny serivisy Bus Greyhound any Western Canada sy ny Avaratry Ontario. Ireo làlana ireo dia manankery amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiarovana ny vehivavy sy ny zazavavy zanatany. Izany no antony hiarahan'ny governemanta federaly miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina vazimba teratany mba hanohana ireo izay voakasiky ny fanafoanana ny serivisy fitateram-bahoaka, ary koa ny fanohanana ny vahaolana tarihin'ny fiarahamonina ao anatin'izany ny fahafaha-manao ara-toekarena vaovao toy ny orinasam-pitaterana an'ny Vazimba. Ho fanampin'izany, tiako ny hanome toky ny mpanjifa amin'ny programa tsy miantoka fiantohana ara-pahasalamana fa tsy ho tapaka ny serivisy fitaterana ara-pahasalamana ary miasa miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ISC mba hahazoana antoka fa misy safidy tsara. "
Ilay Andriamatoa Jane Philpott
Minisitry ny serivisy vazimba
“Amin'ny fiaraha-miasa, ny governemanta federaly, faritany ary faritany dia hitrandraka sy hamolavola vahaolana vaovao sy vaovao hanampiana ny filan'ny Kanadiana fitaterana. Ny fiaraha-miasan'ny governemanta mitohy dia hanohana ny fampandrosoana safidy maharitra ho an'ireo vondrom-piarahamonina sahirana. "
Ilay Dominic LeBlanc manan-kaja
Minisitry ny raharaham-pirenena sy ny faritra avaratra ary ny varotra anatiny
• Tamin'ny 9 Jolay 2018, Greyhound Canada dia nanambara fa hampitsahatra ny serivisy fitobiana iraisana sisa tavela any andrefan'ny Sudbury, Ontario, ny 31 Oktobra 2018, tambajotranà kilometatra mihoatra ny 11,000 izay misy fijanonana 583 ary hatramin'ny 2 tapitrisa ny mpandeha isan-taona. , hoy ny orinasa.
• Ny fampiatoan'ny Greyhound Canada ny serivisy dia mety hisy fiantraikany amin'ny vondrona marefo any ambanivohitra, anisan'izany ireo vondrom-piarahamonina vazimba.
• Ny tompon'andraikitra amin'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny faritany ary ny faritany dia nivory isan-kerinandro nanomboka ny volana jolay 2018 mba hahatakarana bebe kokoa ny fiantraikan'ny fahefana ary hamaritana ny vahaolana mety ho an'ny Kanadiana.